SIDEE LOO SAMEEYAA KURSI AMA JARANJARO JARANJARO LEH OO GACMAHAAGA KA SAMAYSANAYA QORI: SAWIR, SAWIR, SAWIR - INFRASTRUCTURE
Talabixiyaha wuxuu ka sameeyaa qoryo
Baahida marwalba si joogto ah ayuu u soo baxaa qoys kasta.
Dabcan, waxaad ka iibsan kartaa dukaanka ama suuqa, laakiin haddii aad haysato qalabka lagama maarmaanka ah, adiga ayaa sameeya.
Tixgeli laba nooc oo jaranjarro oo guriga lagu sameyn karo.
Waxaa jira noocyada ugu waaweyn ee jadwalka:
doorasho la qaadan karo oo loo isticmaalo iyada oo aan diiradda la saarin;
jaranjarada xargaha (ganaax);
jaranjarrada isku xira, marka, marka la hawlgalo, lagu dhajiyay qaab dhismeed oo la mid ah saddex xagalka isosceles. Inta badan waxaa loo isticmaalaa nolol maalmeedka. Taas bedelkeeda, waxay noqon kartaa jajab hal dhinac ah ama laba dhinac ah. Hayso meel taageero ah ama aan lahayn;
qaabka guddi leh cidhidhiyayaal laga qodo guddiyada kale ama baararka;
duulista Isticmaal halkii shaashadda si ay u shaqeyso. Caadi ahaan rinji liin.
biraha. Waxyaabaha caadiga ah ee loo isticmaalo birta ama aluminium;
Si aad u sameysid gacmahaaga ayaa ka wanaagsan inaad isticmaasho qoryo. Waxaa intaa dheer, kala duwanaanshaha qaab saddex-xagal ah, oo loo isticmaalo guriga, xaaladaha guriyeynta waxaa badanaa lagu sameeyay qaab beddeleyaal ah, marka xajiyaha loo bedelay alaab guri - miis, kursi, kursi ama roog.
Ma taqaanaa? Sawirka dhismaha, oo la mid ah xargaha cawska (cawska), ayaa laga helay derbiyada godka meel u dhow magaalada Spanish ee Valencia oo waxay ku dhowaad 10 kun oo sano jir ah. Shaxdani waxay sidoo kale muujisay laba qof oo ku soo koray iyagoo dambiilayaal ah.
Wixii soo saarid ee tallaabo-qaadayaasha ka samaysan alwaax ayaa u baahan doona qalabkan:
sander ama mid dhexdhexaad ah oo waran ah;
qalin qori ama calaamadeeye.
Naqshadeeyaha ayaa sameeya: video
Qalabka saldhigga tallaabo-jaranjarada:
qiyaastii 14 m oo ah shaabad alwaax ah oo leh width of 50 to 70 mm;
dhejisyada 75-90 mm, dhejisan 8-10 mm qaro, 8 nuts, 4 maydhayaal;
xargaha si nabeek ah lugaha.
Qalabka kursiga taliyaha:
warqad ah qoryo ama foornada leh dhumucda 15-20 mm;
loop piano 40 cm;
45 mm muraayado isku dhafan ama muraayado leh madaxyo miisaan leh;
rinjiga ama nadiifinta, dharbaaxo loogu qurxiyo.
Qalabka, ka sokow kuwa ku qoran liiska talaabo fudud, waxaad sidoo kale u baahan tahay jigsaw.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad barato sida loo sameeyo kuleylka xagaaga ee gacmahaaga loogu talagalay dacha, foosto alwaax ah, kursi baraf ah, majarafad baraf ah, makhaayad, xashiishad, barxadda beerta, iyo geed canab ah.
Talabixin ka samaysan alwaax
Xajiye ka socda bar oo leh jajab hal dhinac ah waa qaab fudud oo ku filan oo ay tahay mid aan xirfad lahayn. Waxay ka koobnaan doontaa laba qaybood - ugu muhiimsan (jaranjarada) iyo haraaga.
Saldhig talaabo ah
Waxaan jaray geedkii hore ee loo baahnaa tirada qaybaha loo baahan yahay ee dhererka loo baahan yahay, sida:
200 cm lugaha gacmaha - 4 gogo ';
59 cm - 2 gogo ';
54.5 cm - 1 xabbo;
50.0 cm - 1 xabbo;
45.5 cm - 1 koob;
41 cm - 3 gogo '.
Qeybaha la helay waa inay noqdaan dhulka.
Waa muhiim! Haddii saliidaas la isticmaali doono waddada, waxa fiican inaad qaadato daaweynta antiseptic.
Isku duwashada qaybta weyn
Waxaan qaadanaa labo lugood oo laba mitir ah oo lugeynaya isla markaana samee calaamad isku mid ah shanta talaabo ee jaranjarada. Talaabada ugu hooseysa waa in ay ahaataa ugu yaraan 10 cm xagga dambe ee lugaha. Masaafada dheer ee u dhaxeysa tallaabooyinka waa 40 cm.
Waxaan ka dhignaa meelo calaamadeysan oo ay ku dhajiyaan 1.5-2 cm oo qoto dheer iyo 5x2.5 cm oo cabbir ah, ka dibna barta barafka waxaan ku dhajineynaa xajmiga cabbirka isku midka ah kaas oo u habeyn doona grooves kuwan.
Maaddaama ay jaranjarada jaranjarada usoo rogto dhinaca sare, dhammaan dhinacyada tallaabooyinka ayaa si fudud u dhajin doona laba rodolitir. Talaabooyinka la qalay wiish ama mallet. Si tartiib ah uga sarreysa sarbeebta sare ee ay saaraan oo ku tirtiraan khariidad dheeraad ah.
Talaabooyinka la geliyo grooves oo ku xidhan nalka. Masaafada u dhaxaysa darfaha sare ee 40 cm, iyo inta u dhaxeysa hoose - 60 cm.
Xayawaanku wuxuu ka kooban yahay labada lugood ee haray, oo kaliya sare (41 cm) iyo hoose (59 cm) dusha kaararka ayaa lagu shubay. Dareemayaasha taageerada iyo iskutalabaadka dheeraadka ah ee jaranjarada ayaa lagu sameeyaa kumbuyuutar, halkii ay ka dhigi lahaayeen hab daraasad ah, si aanay u faragalin dhismaha golaha.
Waa muhiim! Masaafada u dhexeysa labada hoose waxay la mid tahay qeybta ugu weyn - 60 cm iyo inta u dhaxeysa sareeyaashu waa yar tahay - 30 cm Sidaa daraadeed, tallaabada sare waxay yareysaa marka loo eego tallaabada sare ee qaybta weyn (jaranjarada).
Jib ayaa lagu rakibay inta u dhexeysa taakulada sare iyo kan hoose, kaas oo marka hore la qiyaasay oo laga gooyay bararka.
Dhismaha dacha, baro sida loo diiriyo dhulka hoostiisa hoose, sida loo abuuro dabbaasha dacha, sida loo doorto sawirada beerta, sida loo sameeyo goob indhoole ah oo guriga ah, jidadka la taaban karo, dhirta qurxinta, ilaxa, sariirta ubaxyada dhagaxyada, dhagaxa qulqulka, qulqulka qallalan.
Si loo xiro labada qaybood ee dhismaha, qaybaha sare ee lugaha taageerada, fogaan ah ugu yaraan 10 cm oo ka soo wareega sareeya, godadka qodaya ee 8-10 mm (iyadoo ku xiran dhumucda barxadda).
Isku xir labada qaybood leh pin, ku dheji saabuun iyo adkee nuts gudaha gudaha taageerooyinka. Xulo jagada la rabo ee labada dhinac ah oo ku dar nuts furaha si aad u fiican.
Si sahlan, waxaad ku dari kartaa jaranjarada noocaas oo leh qabatooyin aad ku xiran karto qalab ama baaldi.
Noocani wuxuu ku shaqeynayaa farsamo, marka kursiga loo beddelayo jaranjarad, waa mid aad ugu haboon guriga. Si aad u keydiso jaranjarada noocaas ah uma baahnid boor, sababtoo ah waxay ka ciyaareysaa doorka alaabta guriga oo aan la qaban.
Si loo soo saaro kursi, jaranjarrooyinka waa in laga gooyaa guddiga qaababka horey loo diyaariyey, faahfaahintaan soo socota:
laba xajmood oo dhinaca hore ah 20x270x400 mm (A);
laba dhinacyada danbe ee lagu qiyaaso 20x325x850 mm (B);
Saddex xayiran oo ah xajmiga dhabarka 20x50x400 mm (B);
xajmiga kursiga dambe 20x165x400 mm (G);
xajmiga kursiga hore 20x90x400 mm (D);
saddex tallaabo 20x120x360 mm (E);
lix qalab 20x20x95 mm (W).
Saxaro jaranjaro leh oo leh gacmahaaga, sawirada: video
Dhamaan qaybaha la gooyey ee talaabo mustaqbalka ah waa dhul, oo dhinacyo fiiqan ayaa la shaqeeyaa router. Faahfaahin isku day midba midka kale, taam.
Hadda dhismaha waa la isugu dari karaa:
samee sanduuqa xargaha ee kuraasta iyo talaabooyinka ½ qoto dheer ee dhumucda guddiga, dhoobada godadka loogu talagalay;
inay ku dhejiyaan xariijimaha gadaashooda dhinaca dhinacyada leh nalka;
ku shubee sanduuqa qaboojiyaha leh adigoo isticmaalaya kuraasta qoryaha iyo rakibida kuraasta iyo talaabooyinka, iyaga geliya muraayadaha horay loo qoday;
isku xir labada qaybood ee naqshadeynta wareegga piano.
Labo joodar leh walxad hore loo soo ururiyey oo leh dhar ama rinji.
Soo ogow waxyaabaha ay ka kooban tahay xayndaabka waa, sida loo sameeyo xayndaab ka soo wareega xabagta, lebbiska, shtaketnik, xayndaab alwaax ah oo ka soo jeeda, mesh-isku xirka.
Noocyo liddi kuul ah
Si aad uga fogaato boodboodka iyo inaadan dhulka ku xoqin, waxa lagu talinayaa in aad isticmaashid jilbooyin caag ah, oo loo yaqaan "kabo", lugaha jaranjarada. Marka la dooranayo nuucyada noocan oo kale ah, waa in la tixgeliyaa in ay la kulmi doonaan xannibaad xoog leh oo culus, sidaas awgeed, RTI (alaabooyinka caagga ah) waa habboon.
Rugta jaranjarada ayaa sameeya: video
Iskuday iyo isku dhafashadoodu ma shaqeyn doonaan kiiskan, maadaama marinka baska si joogto ah looga wareejiyo meel kale, la duubo oo la dhigo. Dhismuhu waa ka fiican yahay inuu doorto xeelad adag, oo si sahlan u roon.
Caleenta jilicsan ee dhabta ah waxay ku habboon tahay dusha aan ciriiri lahayn, marin-jaranjaro leh "kabo" adag oo adag si loo rakibo dusha sare aan caadi ahayn.
Ma taqaanaa? Kumbber waxaa laga helaa dhejisyo dhejisan. Nidaamkan waxaa soo saaray Michael Charles Goodyear 1839, isku dhafka iyo kululaynta caag-cufo leh cirfoor. Kombiyuutarka laftiisa waa hareer caano ah (geed xaar ah) oo sii kordhaya Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Dadka asaliga ah ee Maraykanku waxay muddo dheer u adeegsadeen soo saarista suxuunta, kubadaha, sida shaabbadeeyaha.
Mararka qaar dhinacyada hoose ee jaranjarada waxaa si fudud loo jarjaraa xagasha iyo walxaha qarxa ee badeecadaha caaga ah.
In la soo saaro qoryaha alwaaxda si ay u hoggaansamaan amniga iyo xeerarka soo socda:
uma baahnid in aad gacmahaaga ku qabato dusha sare ee geedka - waxaad u wadi kartaa maqaarka hoostiisa hoostiisa;
waa ka wanaagsan tahay inaad xirato muraayadaha ammaanka si aad uga fogaato jilbaha indhaha;
ka taxadar markaad la shaqeyneysid qalabka jarista, inaad ka taxadarto farahaaga.
Ka dib marka la dhammaystiro shaqada ku saabsan wax soo saarka jaranjarooyinka waxay u baahan yihiin inay hubiyaan inay ku kalsoon yihiin iyo xasilloonida. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu talinayaa in lagu tijaabiyo jaranjarada meelo kala duwan.
Marka ay qabato shaqooyin kala duwan oo leh saldhig talaabo ah, waxaa lagu talinayaa in lagu hoggaansamo shuruucda badbaadadaas:
hubi xasiloonida dhismaha ka hor shaqada;
markaad ka shaqeyneysid dherer ka badan 1.3 m, isticmaal suunka khaas ah caymiska;
Waa wax macquul ah in qofku uu hoos u dhigo hoosta oo uu ku wareejiyo qalabka lagama maarmaanka ah;
muhiim maaha inaad saldhigto jaranjarooyinka jaranjarada;
looma baahna inaad isku daydo inaad gaarto walxaha ku yaal meel ka badan 1 mitir ee jaranjarada;
Waa wax aan loo baahnayn in la isticmaalo marka la shaqeynayo alxanka, pneumatic, iyo qalabka korontada oo keliya.
Xirfadaha iyo qalabyada qaarkood, waxaad iibsan kartaa shey iyo inaad adigu ka sameysid qoryo. Ma noqon doonto mid adag in la sameeyo qaab alwaax fudud ah, waxay u baahan doontaa qalab caadi ah iyo xirfado gaar ah looma baahna.
Samaynta shidaal wuxuu u baahan doonaa jijin koronto iyo karti u lahaanshaha qoryaha.